SSL C10 သည် SHOPPING CHANNEL ၏ HD ထုတ်လုပ်မှုသို့အေ့ဒ်စ်ရောဂါကိုသက်သာစေနိုင် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » SSL C10 သည် SHOPPING CHANNEL ၏ HD ထုတ်လုပ်မှုသို့အေ့ဒ်စ်ရောဂါကိုသက်သာစေသည်
Mississauga, Ontario - တစ်ဦးက အစိုင်အခဲပြည်နယ် Logic C10 ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဒစ်ဂျစ်တယ်အသံလွှင့် Console အကနေဒါရဲ့လူကြိုက်များလက်လီအသံလွှင့်ကုမ္ပဏီကြီးများ၏စက်ရုံတပ်ဆင်ထားပြီး အဆိုပါစျေးဝယ်ချန်နယ် (TSC) fully- ဖို့ဘူတာရုံရဲ့ switch ကိုကူညီပေးဖို့HD ထုတ်လုပ်မှု။ ဒါဟာဘူတာရုံရဲ့အသံအသင်းအားအလွန်အသုံးဝင်သောသော C10 ၏တနျခိုး, ဖြေလျှော့-of အသုံးပြုမှု, အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက် software နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရဖြစ်ပါတယ်။
TSC က၎င်း၏အပတ်စဉ်အားလုံးအတှကျ console ကိုအသုံးပြုနေသည် HD ကံကြမ္မာစတိုင်နှင့် TGIM - နှစ်ခု reoccurring ပြပွဲအပါအဝင်ဘဏ်ဍာ။ "အခုကျနော်တို့အားလုံးသို့ပြောင်းရွှေ့ပြီးမြောက်သွားပါပြီ HD ထုတ်လုပ်မှုသည် C10 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများရောနှောအတွက်ဿုံကိုက်ညီ "ယောဟနျသ DeHaas, အဆိုပါစျေးဝယ် Channel ကိုအဘို့အတွင်-လေကြောင်းစစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကို fit ဟုသတ်မှတ်သည်၎င်း၏ကြွယ်ဝသောအင်္ဂါရပ်များ C10 ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများနဲ့ options ချောမွေ့သော SSL ကိုထုတ်လုပ်မှု Assistance, ပါဝင်သည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲ Automix ဆော့ဖ်ဝဲ, အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာများအဖြစ်နေ့စဉ် Multi-မိုက်အခြေအနေများသည်ယခုအခါတစ်ဦးက high-quality ရောနှောထုတ်လုပ်ထက် faders လိုက်ဖမ်းအာရုံစိုက်နိုင်ပါတယ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့သည်။ "
4200 စတုရန်းမိုင်မှာပေ 4600 စတုရန်းမိုင်မှာစတူဒီယို A နှင့်စတူဒီယို B ကိုပေ၎င်း၏အသစ်အ 10 စတုရန်းမိုင်အတွက် SSL ကို C350 အားဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးနှစ်ဦးစလုံးပေ။ အဆိုပါစျေးဝယ် Channel ကိုစက်ရုံသည်ပရိုဂရမ်များအတွက်အစုံအမျိုးမျိုးနှစ်ခုအဓိကရုပ်သံစတူဒီယိုပါဝင်ပါသည်။ ။ ။ ။ ။ HD ထိန်းချုပ်ခန်း 1 ။ အဆိုပါဘူတာရုံကိုလည်း console ကိုဖွင့်ကို C-Play မျိုးထွက်အမြန်ပြောင်းလဲကူညီရန်ဘက်ပေါင်းစုံအစက်အပြောက်များနှင့်ဂီတပလေးအောက်ကိုစနစ်နှင့် Eyeconix ရုပ်သံလိုင်း display တွေပေါ်မူတည်သည်။
"ကျနော်တို့ကအလွယ်တကူလိုအပ်သောအသံအစိတ်အပိုင်းများအတွက် drop မှ C-Play ကိုအထုပ်ကိုသုံးပါ," DeHass ရှင်းပြသည်။ "ဒီစိတ်ကူးအင်္ဂါရပ်ကိုအလွန်ကိုအခြားထုတ်လုပ်မှုကိစ္စရပ်များကိုအာရုံစိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်ပိုမိုကြှမျးကကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာရိုးရှင်းသောသိရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်, ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲနေသောနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့စျေးဝယ်အတွေ့အကြုံကိုပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ C10 က၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက် software ကိုရှေးခယျြစရာမြားနှငျ့ Eyeconix ရုပ်သံလိုင်း display ကိုအပေါ်ရိုးရှင်းသောအမြင်ဂရပ်ဖစ်သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများကိုမှတစ်ဆင့်လက်တွေ့ဘဝသို့ဤရည်မှန်းချက်ကိုဆောင် ခဲ့. ကူညီပေးသည်။ "
အစိုင်အခဲပြည်နယ် Logic တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ, ဒီဂျစ်တယ်အသံ consoles စများနှင့်ဂီတ, ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ဖန်တီးမှု tools များ၏ပံ့ပိုးပေး၏ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ post ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုရထုတ်ကုန်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး: www.solidstatelogic.com.
audio အသံလွှင်း post ကိုထုတ်လုပ်မှု 2015-01-29
ယခင်: 2015 HPA Tech မှသီးသန့် (r) Expanded တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဇယားကိုထုတ်ဖော်ပြသ
နောက်တစ်ခု: အဆင်သင့်, သတ်မှတ်, Live! က Sky News, ပထမဦးဆုံး Inmarsat ကို Global Xpress®ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်ထုတ်လွှင့်နေထိုင်ကြသည်။